Manome Endrika Mahatsikaiky Ny Olana Ara-pôlitika Goavana Ao Oganda i Snoogie Mpanao Sariitatra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2016 1:21 GMT
Nanavaka ny fifidianana natao vao haingana tany Oganda ny fifanolanana, fisamborana, ary fiampangana fanodikondinana. Tsy dia zavatra mampihomehy loatra, kanefa mbola misy ihany ny toerana ho an'ny vazivazy. Anontanio fotsiny Snoggie, iray amin'ireo mpitarika amin'ny fanaovana sariitatra politika ao amin'ny firenena, iza matetika mitsikera amin'ny alalan'izy ireny nandritra ny fotoam-pifidianana.
Nandatsaka ireo vatony ireo Ogande tamin'ireo fifidianana ny ho filoham-pirenena sy ny antenimiera ary ny filankevitry ny eo an-toerana tamin'ny 18 Febroary 2016. Andro roa taty aoriana, nanambara ny Vaomieran'ny Fifidianana ao Oganda fa ny filoha amperinasa Yoweri Museveni dia nandresy tamin'ny vato 60.75%. Ny kandidà lehiben'ny mpanohitra Kizza Besigye, izay voasambotra im-betsaka nandritra ny vanimpotoana nitondra ho amin'ny fifidianana, no nanaraka tamin'ny vato 35.37%, ary ny Praiminisitra taloha, Amama Mbabazi, no tafiditra fahatelo tamin'ny vato 1.75%.
Nizara ny kantony tao amin'ny gazety Daily Monitor i Snoogie ary koa tao amin'ny pejy Facebook-ny, Snoggies World for Uganda, izay manana mpanaraka manakaiky ny 30.000. Manolotra ny topimaso momba ny ara-politika ao Oganda amin'izao fotoana izao ny sariitatra ataony.
Nandà tsy hanatrika ny fifanakalozan-kevitr'ireo mpirotsaka ho filoham-pirenena ny filoha Museveni, tamin'ny nilazany fa sahirana izy. Na izany aza, dia nanatrika ny fifanakaozan-kevitra faharoa nifanaovan'ireo mpirotsaha ho filoham-pirenena izy. Sekreteran'i Museveni nisahana ny fifandraisana amin'ny gazety nandritra ny 13 taona i Mirundi.
Midika hoe manampahefàna ny Afande amin'ny fiteny Swahili, ary Dr. Badru Kiggundu no mpitari-draharaha ao amin'ny Vaomieran'ny Fifidianana. Ilay lehilahy eo ambanin'ny fanaraha-mason'ireo polisy dia i Kizza Besigye, izay in-efatra voasambotra tao anelanelan'ny 15 sy 23 Febroary. Niharan'ny fitànana tsy mahazo mivoaka ny tranony izy taorian'ny fanambarana ny vokatra.